Tsy resaka entana ara-nofo ihany io: ho an'ny fahasambaran'ny olona roa, atombohy amin'ny baolina mampihena an'i Yin
1. Ny tsy fomban'ny gorodona pelvika dia ny vehivavy antitra sy antitra izay miteraka no miseho matetika amin'ny tsy fahombiazan'ny vehivavy. Noho ny antony samihafa amin'ny tsy fetezan'ny gorodona, tsy mitovy ny soritr'aretina, ao anatin'izany ny soritr'aretin'ny fahasosoran'ny urinary, toy ny fivalanana matetika, ny fahamehana ...
Ahoana ny fomba hisafidianana vibrator mety
Ny ampahany manaitaitra dia zava-dehibe Toy ny amin'ny sofina maranitra, na amin'ny zoro maranitra, dia tsy faniry! Ankehitriny ny endrika mahazatra eny an-tsena dia ny antennae lolo, renitantely kely, bitro kely sns, ary ny endrika vaovao dia endrika voninkazo, endrika mpankafy sns. Endrika mifidy araka ny ...
Fomba fampiasana sy fitazonana ny vibrator ho an'ny filan'ny vehivavy
Fomba fiasa Ny vibrator, fantatra amin'ny anarana hoe stick multi-function retractable, dia natao hanahaka ny fisintomana sy ny fampidirana hetsika an'i Yinjing lahy. Ny vatan'ny vibrator dia azo alaina ao anatin'ny 1-3cm, ary ny fomba isan-karazany dia manambatra asa maro samihafa toy ny fanentanana ny pozra, ny fitsambikinana atody, ny fihodin'ny vakana ...